ㆍISBN : 9788965326120
ㆍPages : 238
Dzidziso Dzekutanga dza KRISTU
Kwatiri vanotenda kuna Mwari, kutenda nedaviro dzeVapostori zvinotipa zvidzidzo zvepamweya zvakakosha. Kutenda kwavo kunobva kwave pfuma yakakosha, nekuti vakatenda kuevhangeri inobata kururama kwaMwari. Naizvozvo, tose tinofanira kuva nekutenda kwakadaro nekukasika.
Aninani anotenda kuna Jesu anofanira kuziva kururama kwaMwari uye agotenda kwakuri, uye anofanira kukugovera pasi pose, nekuti ndipo bedzi vamwe vanhu vanosvika pakuzivawo kururama uku uye nekutenda kwakuri. Uye kuburikidza neShoko raMwari, vatadzi vese vanofanira kudzidza nezvekururama kwake. Uye vanofanira kutenda, nekuti ndiwo matorero avanokwanisa kuita kururama kwaMwari nekutenda.
Pasina kutenda kunotendera munhu kuti awane kururama kwaMwari kubva kuShoko rake, hakuna munhu angagona kugamuchira Ishe seMuponesi wake. Tinofanira kudzokera zvino kukutenda kwezvokwadi uko kunoziva uye nekudavira kukururama kwaMwari, nekuti avo bedzi vanotenda kukururama kwaMwari uku ndivo vanogona kuva vaprista vake vehumambo. Kuti vaprista vehumambo pano zvinoreva avo vakagamuchira kuregererwa kwezvivi zvavo nekutenda kukururama kwaMwari. Tinogona kuva vatendi vezvokwadi avo vane kutenda kwechokwadi kuburikidza bedzi nekutenda kukururama kwaMwari uye nekuva vanhu vake vakarurama. Zvinogoneka zvakanyanya kuti isu tose tive nekutenda kumwechete nekwakanga kuine Vapostori.